QALABKA ASTROPHYSUS: FAAHFAAHINTA SAWIRADA, NOOCYADA, SIFEYNTA BEERAHA IYO DARYEELKA GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Noocyada daryeelka ee Astrophysupka ee guriga
Dadka wax soo iibsada ee cacti waa sida yaryar, xiddig u eg xiddigaha sida astrophytum. Kani waa kumbuyuutar qashin ah.
Daryeelidda iyaga ma aha wax ka adag tan noocyada kale. Baro sida loo koro astrophytum, oo ku dar waxyaabahan xiisaha leh ee uruurintaada.
Qeexida Botanical ee dhirta indoor
Magacyada inta badan waa sifooyinka ugu sharraxsan dhirta. Magaca Laatiinka Astrophytum asteria (astrophytum asterias) - wuxuu tilmaamayaa xajka xiddigga wuxuuna muujiyaa qaabka. Sidoo kale waxaa jira magacyada qoryaha bacaadka ah - sida ku cad qaybta qaybinta, kalluunka badda - sababtoo ah qaabka iyo caleemaha yaryar, ceyliyaha Peyotl (Williams lophophore) - si la mid ah qaabka.
Cudurka wuxuu ka kooban yahay 10 nooc. Astrophytum waxay jeceshahay in ay ku koraan dhagaxyada dhagaxa ah ee buuraha, qumbaha iyo dhoobada. Meelaha lagu qeybiyo dabiiciga ah: Koonfurta Ameerika, Texas, Mexico. Wareegidda, noocyada iskood u sameysan ee loo yaqaan 'self-pollinated species' ayaa loo isticmaalaa marka loo eego caanahaas iyo xiisaha ay u hayaan. Laga soo bilaabo hal nooc, waxaad si sahlan u kori kartaa Beelaha dhowr ah. Qaababkiisa guud wuxuu leeyahay cabbirka 5-15 cm dhexroor oo ka kooban 8 qaybood. Dhinacyada caktoosku waxay ka mid yihiin foomka jilicsan. Tirada qaybaha ama dhinacyada kala duwan ee kala duwan ayaa ka duwan - laga bilaabo 5 ilaa 8 gogo '. Midabka - laga bilaabo cagaarka ilaa bunaal buni ah. Dhibcaha cad oo yar yar ee cidhifyada waa cawliyaha yaryar ee timaha kuwaas oo nuugi kara qoyaanka hawada. Noocyada qaar ka mid ah maadada astrophytum waxay leeyihiin fuusto fiiqan, halka kuwo kalena ay leeyihiin jilicsan ama midkoodna ma jiro.
Haddii dhirta ay ku koraan xaalado aan fiicnayn, way ku duuli kartaa guga laga bilaabo Maarso illaa May, taas oo ku xidhan noocyada. Ubax ah ama ubax caddaan ah ayaa gaari kara 7-8 cm dhexroor. Ubaxa wuxuu ku yaalaa dhinaca sare ee geedka. Miro ayaa ah mid daalan, mararka qaarkood cawl, casaan ama casaan.
Waa muhiim! Astrophitums dadka waaweyn ayaa aad u adag in la daryeelo. Geeduhu waxay u dhiman karaan sababo aan la garanayn, iyaga oo ku xiran dhammaan sharciyada mawduucooda.
Waxaa jira dhowr ka mid ah noocyada ugu caansan ee caktus this:
Astrophytum asterias (xiddig) - Cakuus ugu caansan ee caankan. Warshadani waa qaab muuqaal leh oo leh sideed wajiyadood oo qaab ah xiddig. Waa qof degan dhagaxa dhagaxda ee lamadegaanka Mexico iyo Texas. Dhexdhexaadiyaha dhirta waa 15 cm Dhererkoodu waa 8 cm, dusha sare waxaa lagu daboolaa dhibco cad, timo, maqaarku waa maqan yihiin. Midabka - cagaar mugdi ah. Ubaxa waa jaalle. Waqtiga ubaxa - guga;
Capricorne Astrophysus (Capricornus) - ubaxyo cakin. Naxariistii loo yaqaan 'capsorn' ayaa ah inuu bilaabmayo horumarinta kubadda, ka dibna waxaa la soo saaraa oo uu noqdaa cylindrical. Habitat - lamadegaanka waqooyiga Mexico. Dhexdhexaadiyaha dhirta waa 10 cm, dhererkuna wuxuu gaaraa 25 cm, waa caksi-cagaaran oo leh 7-9 feero, qoyaan aad u dheer iyo ubax huruud ah oo leh xarun guduudan. Waqtiga ubaxu waa xagaaga. Qaabkii curdanka ahaa ee uu qoday wuxuu u adeegsaday asaas ahaan magaciisa sababtoo ah wuxuu la mid yahay geeska ariga;
Astrophytum caput-medusae (madaxa jellyfish) - Tani waa qadar gaar ah oo aan caadi ahayn. Miiskoodu wuxuu aad u hooseeyaa faruuryaha. Qaabka ayaa ah cylindrical, ciriiri, curved. Bush ayaa dhif ah, laakiin waxaa jira sidoo kale tijaabooyinka noocan oo kale ah oo yar yar u egtahay raaxo. Heerkuna wuxuu gaaraa 19 cm, jiriduna waxay ku dabooshaa tuubbo yar yar. Dhalinyaradooda, tubercles waxay leeyihiin qaab cylindrical ama marmarka qaarkood saddex xagal, oo u eg qaabka caleemaha. La daboolaa nacnac. Midabka waa grayish. Ubaxa waa yar yahay, ma dhaafin 0.5 cm dhexroor, huruud ah. Jaadka miro ayaa lagu daboolaa miisaan iyo cadaan "white". Qaabka miro ayaa ah mid ballaaran. Midab - cagaar;
Astrophytum coahuilense (Coahul) - qaab muuqaal ah oo leh shan shuban. Waqti ka dib, waxaa lagu tuuri karaa tuubbada. Feeraha, oo leh qaab dareen ah da 'yar, waxay noqdaan kuwo aad u badan marka ay koraan. Wuxuu ku koraa Mexico. Gaaray 50 cm oo dherer ah iyo 20 cm dhexroor. Ubaxadu waa cagaarsho cuncun oo casri ah, inkasta oo ay noqon karaan guduud saafi ah ama jaale ah oo aan caadi ahayn. Midabka midhaha - laga bilaabo casaan ilaa cagaarka saytuunka iyo basaltel;
Astrophytum myriostígma (multifilament) wuxuu ku koraa buuraha waqooyi-bari iyo bartamaha Mexico. Kuwa ka mid ah dadka wax soo iibsada waxaa lagu qiimeeyaa sida cakus asalka ah oo aan qodnayn. Waxay ka iman kartaa 3 ilaa 7 geesood loo yaqaan (badanaa - shan jeer). Xanuunada cusub ayaa laga yaabaa inay la muuqdaan da '. Dusha sare ee geedka waxaa lagu daboolay timo madow oo yar, kaas oo siinaya midab cad. Dhalinyarada, xarkaha ayaa leh qaab muuqaal leh oo dhexdhexaad ah oo ah 4-6 cm. Wakhti ka dib, waxay u fidisaa dhismaha cylindrical. Ubax waa caddaan leh xarun jaale ah. Miraha waxaa la sameeyay guduud, shaggy;
Astrophytum ornatum (qurxinta) wuxuu ku koraa Mexico. Waxay badanaa ku koraan canyons duurjoogta ah iyo dhagaxyada dhagaxda. Waxa kale oo lagu gartaa qaab muuqaal ah. Muuqaalka ugu muhiimsan ee warshadu waa cirbadaha cad ee cufan ee miisaanka qoyan ee dhinaca geesaha. Noocaankan waxaa loo tixgeliyaa sida ugu weyn ee qoyska loo yaqaan 'astrophytum'. Waxay haysaa qaab muuqaal ah, gaaraya dhexdhexaad ah 20 cm (gudaha floriculture gudaha). Lamadaanta waxaa ku jira tijaabooyin waaweyn. Midabku wuxuu u dhexeeyaa cagaarka cagaaran ilaa cagaarka madow. Waxay u sameysan kartaa ilaa 8 geesood oo ah qaab toos ah, laakiin waxaa jira sidoo kale geeso ku ordaya dabayl. Ubaxa waa mid cufan, ballaaran, liin, 7-12 cm ballaaran. Qeybaha hoose ee perianth waxay si ballaaran u taaganyihiin, oo leh ballaaran, tiro badan, ama ka yar.
Ma taqaanaa? Qalbigii "madaxa jellyfish" ayaa la furay oo kaliya 2002-dii, xitaa markii hore ayaa lagu go'doomiyay noocyo kala duwan, sababtoo ah maaha mid u eg cakta kale ee aduunka.
Shuruudaha beerashada guuleysiga guriga
Dhammaan dhirta, iyada oo aan ka reeban, marka ay sii kordheyso, waxay tixgeliyaan heerka baahida iftiinka, kulaylka iyo xaaladaha waraabka, qoyaanka hawada iyo heerkulka. Suuroolayaasha, xuduudahaani waxay leeyihiin macnooyin kala duwan waqtiyada kala duwan ee sanadka. Sidaas, inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, astrophytum ayaa si firfircoon u horumarisa. Muddadani waxay bilaabmaysaa Maarso waxaana la boodaa bisha Sebtembar. Xilliga jiilaalka, dhirtu waxay u dulqaadan kartaa heerkulka hoose iyo dhexdhexaad ah biyaha.
Sii dhirta iftiinka iftiinka leh. In qorraxda tooska ah, gubashadu waxay ku dhici kartaa dusha. Astrophitums qaarkood waxay u adkeysan karaan iftiinka qorraxda, laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho daaqadaha galbeedka iyo bariga si loogu meeleeyo. Xilliga xagaaga waxaa lagula talinayaa in dharka la dhigo dariiqa habeenkii si ay uga ilaaliyaan roobka duufaanta leh. Xilliga xagaaga, sidoo kale waa mid macquul ah in la yiraahdo cakta pritenyat galabtii, gaar ahaan haddii lagu rakibo daaqada galbeed. Xilliga jiilaalka, saacadaha iftiinka maalinta, liddi ku ah, waxay u baahan yihiin in lagu kordhiyo iftiinka macmalka qolka ilaa 8-10 saacadood.
Waa muhiim! Iyadoo la'aanta iftiin, astrophytum wuxuu bilaabi doonaa inuu ku fido dhererka iyada oo aan loo eegin qaabka dabiiciga ah isla markaana wuxuu bilaabi doonaa inuu lumiyo midab. Xaaladahaas oo kale, ma awoodi doonaan in ay Bloom.
Astrophytum waxay si fiican ugu koraan cimilada kulul. Xilliga xagaaga, dheef-shiid kiimikaadka wuxuu ku dhacaa inta badan firfircoonida, sidaas darteed, heerkulka raaxada guriga waa + 22 ... + 28 ° C. Muddadii laga bilaabo Oktoobar ilaa guga, suuqyadu waxay ku nasanayaan. Xilligan, heerkulku waxa uu si tartiib tartiib ah hoos ugu dhigi karaa + 10 ... +14 ° C. Astaamaha qaar waxay u adkeysanayaan heerkulka ilaa + 4 ° C.
Qoyaanku waa inuu dhexdhexaad ahaado, oo aan ka badnayn 60%. Waxaa laga heli karaa aqalka, oo aad ugu qanacsan tahay cakti iyada oo aan wax isbeddel ah samayn. Haddii aad dooneysid inaad jidka ku dhejisid, markaa qoyaan badan (cimilada roobka) waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo oo ha iloobin inay ka shaqeeyaan fungicides bakteeriyada iyo kallana.
Beeraha cusub waxay jecel yihiin cacti si ay u fududeeyaan daryeelka. Badankooduna si fiican ayay u horumaraan, xitaa haddii aadan waxba u qaban. Beeraha cusub ayaa lagula talinayaa in ay soo baxaan Astrophytum ornatum ama Astrophytum myriostigma, kuwaas oo aan u baahnayn shuruudaha. Dhirta waxay u baahan yihiin ciidda macdanta leh oo si fiican u dillaacsan. Waxay sidoo kale u baahan doonaan meel ku filan oo iftiimin leh koritaanka iyo waraabinta toddobaadka ee xagaaga. Ku dar bacriminta yar, xayawaankaaga xayawaankuna wuxuu ku raaxaysan doonaa, inkastoo uu kordho tartiib tartiib ah.
Ma taqaanaa? Adeegga Qaranka ee Qaranka ee Park waxay ku xireysaa microchips caksi kaas oo ku kora beeraha waxayna ka tirsan yihiin noocyada la ilaaliyo si looga hortago xatooyadooda. Tuugo ayaa qodaya cacti, abaabulida iibka sharci darrada ah ee xanaanooyinka iyo guryaha gaarka loo leeyahay. Chips waxay caawiyaan raadinta iyo aqoonsashada cakti ka dib iibka.
Ka waraabinta sifooyinka
Cabbitaanka saxda ah ee loo yaqaan "astrophytum" ​​waa caddayn. Ha ku dhaafin biyaha. Succulents ayaa ururiya qoyaan, sidaas awgeed wakhti wakhti ah ayaa la samayn karaa iyada oo aan dhammaan waraabinta. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah dadka degaanka ah ayaa laga yaabaa inay xitaa yaraato oo ay dib u bilaabaan horumarinta ka dib roob muddo gaaban sababtoo ah xididka la ilaaliyay. Ku waraabinta daawada astrophytum oo loo kala qeybiyay laba jeer iyo xaalado gaar ah:
Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, waraabinta waxaa la qaadaa ugu yaraan toddobaadle. Biyaha waraabinta si ay u badan tahay cufan leh qoyaan. U oggolow ciidda inay si wanaagsan u qalajiso. Inta lagu jiro maalinta, geedka ma koraan oo bilaabaan inay si firfircoon u isticmaalaan qoyaan iyo nafaqo ka dib qorrax dhaca, sidaas u biyo ka dib 18:00.
Si looga fogaado xayiraadda ciidda, bannaanka qaar ayaa sameeya waraabinta hoose. Ku shub biyo heerkulka qolka qolka oo ku dhaaf 20 daqiiqo si aad ugu oggolaato substrate in ay soo nuugto qadarka loo baahan yahay dareeraha, ka dibna ka daadi inta ka hartay. Ha ka dheereyn biyaha, si aysan u abuurin shuruudo wanaagsan oo loogu talagalay horumarinta jirrooyinka.
Laga bilaabo dayrta ilaa guga, waxaa la joojiyaa waraabinta, laakiin waxay si tartiib tartiib ah u sameeyaan. Heerka waraabka ayaa lagu qiyaasaa dhibcaha kudhaca (aan ka badneyn 30 g) geedka oo dhan iyo in aan la qaadin wax ka badan 1 mar bishiiba. Marka laga reebo xaaladdu waa haddii la soo koobi karayo sumadaha suuban, waxaadna aragtaa in qaabka aad u baahan tahay inaad ku shubto. Marka heerkulku hoos udhaco + 10 ° C, waraabinta si buuxda ayaa loo joojinayaa.
Badanaa waxaa la waraabiyaa biyo kulul. Daadinta guga wuxuu bilaabmaa marka dhirta ay muujiso calaamadaha koritaanka ubaxyada cusub iyo maqaarka dhalinyarada.
Ma taqaanaa? Cawsus Cactus waa caleemaha isbedelka ah ee la beddeli karo oo bixin kara nafaqooyinka hawada. Photosynthesis of cacti xambaarsanyahay asliga ah.
Warshadda waxaa la bacrimiyey hal mar bishii muddada koritaanka firfircoon. Tani waxay noqon kartaa bacrimin la mid ah sida inta kale ee cacti, laakiin leh diirada oo daciif ah. Laga bilaabo gu'ga ilaa dayrta, waxay inta badan isticmaalaan Bacriminta dheellitiran, kuwaas oo qaybaha siman ku jira nitrogen, fosfooraska iyo potassium - 20:20:20, ama isticmaal bacrimin leh qaybta yar ee nitrogen. Tan iyo xilliga dayrta ee daawada astrophytum. Haddii kale, diirada sare ee Bacriminta macdanta ee ciidda waxay ka sii dari kartaa xaaladda geedka xilliga qaboobaha.
Qalitaanka Astrophytum waxaa lagu sameeyaa oo kaliya marka loo baahdo. Rootiyada jaban ayaa adkaata in ay soo kabsadaan iyo xidid, iyo dhirta ayaa dhiman kara. Waxyaabaha laga reebo waa xaaladaha halka xididada ay ka sareeyaan dheriga dheriga.
Ka hor inta aan laga bexin qadin ku yaal hoose ee dheriga, lakabka dhagxaanta, lebbiska jajaban ama dhoobo dhoobo ayaa la dhigaa si loo soo saaro qoyaanka xad-dhaafka ah ee xididdada. Dhagaxyada qurxinta waa in la dhigaa meel dhulka hoostiisa ka dib ka dib. Haddii kale, qoorta dhirta pre-geeska ayaa bilaabmaa inay qudhuntaan. Transplantation waxaa lagu fuliyaa guga, sida ugu dhakhsaha badan geedka kiciyo iyo bilaabaan inay koraan. Tani waxay ka muuqaneysaa midabada dibadda ee loo yaqaan 'astrophytum'. Dusha sare waxay ku dhacdaa iftiin madow. Isu-tallaalidda isticmaal dherer 3-4 cm oo ka weyn taayirka hore.
Roots waxay si taxadar leh ugu dhaqaaqaan dherer kale oo dhulka la socda. Warshad ka hor inta aanad dhicin ayaan la waraabin maalmo badan. Iyo transplanted ka qalalan ilaa substrate qalalan. Markii ugu horeysa waraabinta waxaa la sameeyaa usbuuc ka dib marka la isu tallaalayo.
Waa muhiim! Cacti Dadka waaweyni kuma talinayaan in dib loo celiyo wax ka badan hal mar 5-kii sano ee kasta.
Astrophytum waxay soo saartaa oo keliya miraha. Bukannada abuurka badanaa waa mid aad u sarreeya. Qodobbada lagu beerayo abuurka guga. Si aad u abuurto miraha astrophytum, waa lagama maarmaan:
Diyaarso substrate ah caleenta caleen, webi aan ahayn ama sanduuqa kaydka iyo ganaaxa. Dhamaan qeybaha waxaa lagu xisaabiyaa si isku mid ah.
Qaybaha la diyaariyey waa isku dhafan yihiinna qoyan yihiin.
Seeds waxaa lagu buufiyaa biyo diirran (+ 30 ... + 35 ° C) iyo xalka daciifka ah ee potassium permanganate 20 daqiiqo. Kadibna waraaqda loogu talagalay qalajinta qayb ahaan.
Ku rid carrada dheri ama weel.
Abuuri miraha oo iyaga ku rusheeyso dusha sare ee lakabka ah ee carrada aan lahayn dhumuc ka badan 1 cm.
Ku dabool muraayad ama caag ah si aad u abuurto qandho-yar oo leh heerkul hawo ah oo ku saabsan + 20 C
Ka saar muraayadda ama filimada si joogto ah u hawo qalaji iyo qoyan ciidda. Waraabiyo dhexdhexaad ah ka dib qalajinta dhamaystiran ee ciidda. Qoyaan xad-dhaaf ah looma oggola.
Toddobaadkii, caleemaha ugu horreeya ayaa soo baxaya. Sida ugu dhakhsaha badan geedo noqdaan kuwo xoog leh, waa in lagu meeleeyay dheryo gooni ah.
Beeraha laga beerto waxa la sameeyaa laga bilaabo Maarso ilaa Agoosto, taas oo ah, inta lagu jiro xilliga sii kordhaya.
Dhibaato sii kordheysa
Daryeelka aan fiicneyn ee daawada astrophytum wuxuu keeni karaa cuduro ama cayayaanka. Dhibaatada ugu weyni waxay sababtaa isticmaalka aan habboonayn ee isku dhafka ciidda. Halbeegga mulkiinka dukaanka ah waxaa laga yaabaa inuu ka kooban yahay peat, kaas oo ka kooban waxyaabo badan oo la yiraahdo "astrophytum" ​​ma aha mid xasilloon oo dhiman kara.
Ma taqaanaa? Hooska iftiinka ee caleenta cakuusku wuxuu ka tarjumaa iftiinka qoraxda, taas oo ka caawinaysa dhirta inay qaboojiso. Intaa waxaa dheer, xayawaanka ayaa dhirta ka ilaaliya shimbiraha ama xayawaanka kuwaas oo u isticmaali kara ilaha qoyaanka.
Dhibaatooyinka ugu weyn ee soo wajahday growers growers:
Burooyinka jilicsan iyo caaryada hoose ee geedka. Sababta ugu weyni waa biyo badan, gaar ahaan heerkulka hooseeya. Ama cufnaanta sare ee ciidda, oo aan si fiican u gudubi karin xad-dhaaf ah qoyaan. Beddel xalka ciidda si dabacsan, oo leh heer sare oo ah ciid ama perlite.
Xuubaha Brown ee feeraha - natiijada sunta. Daarad daaqad ama u wareeji geedka si aad u degto.
Meelaha la iftiimiyay ee dusha sare - dhaawaca cayayaanka ama waraabinta tayada liidata oo leh fara badan oo lime, la'aanta biyo iyo heerkul hooseeya inta lagu jiro xilli sii kordhaya. Fiiri shuruudahaaga tixraaca oo samee isbedel.
Xoojinta stem waa calaamad nalalka aan ku filneyn ama heerkulka sare ee qolka.
Cayayaanka ugu weyn cayayaanka ee loo yaqaan 'astrophytum' waa scythe. Tani waa cayayaan yar oo ka yimaada qoyska coleoptera. Waxay u egtahay meel yar oo wareeg ah oo ku taal daaqada.
Baro sida loola dhaqmo gaashaanka dhirta gudaha.
Jirka cayayaanka wuxuu daboolayaa gaashaan cufan leh oo loo yaqaan 'insecticides', sidaa daraadeed waxaa lagula talinayaa in laga takhaluso cayayaanka gacanta ulakal yar ama cadayga oo lagu rusheeyey xal suufka. Ka hor inta aanad bilaabin shaqada, waxaad ku dabooli kartaa ciidda dherer leh warqad ama filin si ay u sahlanaato in la ururiyo cayayaanka dhacay. Meelaha ay waxyeeleeyeen cayayaanka waxaa lagu daaweyn karaa dhuxul si looga fogaado infekshanka fytopathogens.
Akhri wax ku saabsan dhirta ugu caansan ee loogu talagalay beerista guriga.
Cudurada ugu muhiimsan ee astrophytum, iyo sidoo kale cacti kale, waxaa lala xiriiriyaa kalluunka kala duwan iyo kalluunka bakteeriyo kala duwan. Warshad caafimaad leh oo sii kordheysa ayaa si buuxda awood ugu leh inay wax ka qabato dhibaatooyin yar oo keligood ah. Si kastaba ha noqotee, haddii ay soo weerarto cayayaanka, markaa phytopathogens ayaa geli kara meelaha waxyeellada leh ee unugyada dhirta. Waxay sidoo kale geli karaan xididdada cirridka leh qoyaan xad dhaaf ah iyo aereyn sabool ah.
Haddii dhibaato la helo, waxaad u baahan doontaa:
Diyaarso mindi sterile ah (oo lagu daaweeyo biyo leh cadar ama aalkolo).
Ka saar dhirta dheriga.
Iska fiiri xididada oo raadso meelo kala duwan, iyo sidoo kale dhibco casaan ah ama midab madow.
Gooyo dhamaan meelaha ay saameeyeen.
Daadi dusha laga jaray dhuxusha.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa fungicides si loo soo saaro, laakiin waxaa laga yaabaa in aysan waxtar lahayn oo ka soo horjeeda noocyo kala duwan oo fangaska ah oo sababa burburka. Daawada marwalba ee dhirta leh fungicides-ku salaysan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
Ma taqaanaa? Walaac, laakiin xitaa xitaa yar yar waxay leeyihiin xidido waaweyn. Waxaa laga yaabaa in ay jiifaan, laakiin waxay ku faafaan aag ciriiri ah, oo ka kooban aalado ilaa 2 m dhexdhexaad ah agagaarka warshadaha, sidaas darteed weelasha ballaaran ayaa doorbidaya beeritaanka cacti halkii ay ka dhigi lahaayeen dheriyo.
Kooxda soo socda ee cudurada waxaa sababi kara macdan la'aanta carrada. Natiijo ahaan, waxay noqotay mid aad u alkaliso. Tani waa waxa dhacaya marka waraabinta laga soo saaro biyaha tuubada oo leh maaddada "chlorine content". Waxay ku urursan tahay ciidda waxayna bedeshaa heerkulka acidity. Isku day inaad codsato dihydrophosphate potassium si ciidda, raacaya tilmaamaha ku jira xirmada diyaarinta. Ku waraabinta biyo kala go'ay ama biyaha roobka ayaa sidoo kale xalinaya dhibaatadan. Cudurada sidoo kale waxay la xiriiri karaan xad-dhaaf ah phytopathogens ee ciidda oo ku saleysan taam. Xaaladdan oo kale, dhirtu waxay u egtahay mid yaraaday, joogsiyada kobaca. Astaamaha loo yaqaan 'astrophytum' oo ku habboon ciidda.
U hoggaansamida shuruucda daryeelka dhirta ayaa kaa caawin doona inaad iska ilaaliso dhibaatooyinka ugu badan waxayna ku farxi doonaan ubax. Laakiin sidoo kale waa inaad tixgelisaa in caktoosku uusan aheyn mid degan cimilada dabiiciga ah, haddana wali wuu dhiman karaa sababtoo ah saameynta mid ka mid ah waxyaabihii hore ee dabiiciga ah. Tani maahan khasab maadaama ay khaladaad ka tahay cawska.